VistraMarine Collagen Tripeptide 1300 & CoEnzyme | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Vistra Marine Collagen Tripeptide 1300 & CoEnzyme
မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် သောက်သုံးနိုင်ခြင်း
မိမိအသက်ထက် နုနယ်လှပသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း
ရောင်းချသူ Bellagio Trading Co. Ltd
8 နှုန်းအား အခြေခံ၍
Ko Naung Naung
2017 မေ 29
Vistra Marine Collagen Tripeptide 1300 & CoEnzymeသောက်ပြီး ၂လမှာ အသားရေစိုပြည်လာတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Htet Htet Tun
2017 မေ 15
This medicine is can give me youthful age and after one week my skin is clean. but now I stop that coz pregnancy. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
May Thet Hnin Wei
2016 မေ 23
အသားအရေကို သိသိသာသာ လှစေလို့ တကယ်စွမ်းပါတယ်။ Vistra ကိုကြိုက်သွားပါပြီ။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ အသားအရေကို တင်းရင်းလှပစေပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Vistra Marine Collagen လေးကို ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အသားအရေကို သိသိသာသာဖြူဝင်းလာစေတဲ့အပြင် အရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ်။ အမည်းစက်နဲ့ အမာရွတ်လေးတွေလဲ သိသိသာသာနည်းသွားတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
နုပျိုငယ်ရွယ်သော အသားအရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် collagen ဖြစ်ပါသည်။ မှန်မှန်သောက်သုံးပါက အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အမာရွတ်၊ အမဲစက်နှင့် အသားအရည်တွန့်ခြင်း လျော့ရဲခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ လှပဖြူဝင်းပြီး ချောမွတ်တောက်ပြောင်သော အသားအရည်ကို အချိန်တိုအတွင်း ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Marine Collagen Tripeptide 1300 & CoEnzyme